Wariyo katirsan wasaarada warfaafinta ayaa dhaawac ka soogaaray gaari ay wateen ciidamada AMISOM – STAR FM SOMALIA
Kolonyo ay la socdeen gaadiidka ciidamada Amisom ayaa goor dhaweyd waxa ay Magaalada Muqdisho ku jiireen Wariye C/raxmaan Gacan oo ka tirsan Shaqaalaha Wasaarada Warfaafinta Somaliya, gaar ahaana Idaacada Codka Ciidamada Qalabka sida ka howlgala.
Gaadiidkaan oo maraayay afaafka hore ee Madaxtooyada Somaliya, ayaa mid ka mid ah wuxuu jiiray Wariyaha oo ku socdaalayay wadada, kadib markii taayarka Baabuurka uu cagta ka maray Wariye C/raxmaan Gacan.
Wariyaha ayaa la sheegayaa in lugta qaybta cagta hoose ah labo meel ay ka jabtay, iminkana lagu dabiibaayo Isbitaalka Daarul Shifa ee Magaalada Muqdisho.
Wariyeyaal kale oo la jooga Wariyaha ayaa sheegay gaadiidka ciidanka Amisom ee jiiray Wariyaha inay goobta ka dhaqaaqeen, iyaga oo aanan dareen badan siinin falkaasi dhacay.
Ciidamada Amisom ayaa dhowr mar waxa ay Magaalada Muqdisho ku jiireen dad shacab ah iyo gaadiid intaba, mana jirto tallaabo sax ah oo ciidamada laga qaaday.
Caruur yar yar oo gaadiidka Amisom Muqdisho ay ku jiireen ayaa ku jira Isbitaalada Magaalada Muqdisho, kuwaasi oo qaarkood naafo noqday halka kuwa kalena lugta ay ka jabeen.
Ciidamada Amisom ee howlgalka u jooga Somaliya, gaadiidka ay wataan ayaa xawaaro dheereeya ku mara wadooyinka Magaalada Muqdisho.